Zimbabwe Yoramba Zviga zveUnited Nations paNyaya yeChikwereti cheMari yeSarudzo
Kurume 13, 2013
WASHINGTON — Nyaya yechikumbiro cheZimbabwe kuUnited Nations yemari yesarudzo inogona kunetsa sezvo Zimbabwe yave kuda kutsika madziro ichiramba kutambira zvimwe zviri kudiwa neUnited Nations ichiti kupindira mumatongerwo enyika.
Mukutanga kwaKukadzi, Zimbabwe yakanyora tsamba kuUnited Nations ichikumbira rubatsiro rwemari yekuti iite sarudzo. United Nations yakapindura tsamba yeZimbabwe ichiti yaizotumira nhumwa dzayo kuZimbabwe.
Asi Zimbabwe inoti haisi kufara nezvimwe zvoda kuitwa nenhumwa dzeUnited Nations idzi. Zviri kuramba kutambirwa neZimbabwe zvinosanganisa nyaya yekuti UN ione mamiriro akaita kodzero dzevanhu munyika kuburikidza nekusangana nemasangano akazvimirira oga uye fungidziro yekuti sangano iri ringade kuzoongorora sarudzo.
Gurukota rezvehupfumi VaTendai Biti vanoti ivo negurukota rezvemitemo VaPatrick Chinamasa vakatonyora havo tsamba kuUnited Nations yekuti itumire nhumwa dzayo kuzoita hurukuro nehurumende.
Mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe, mutungamiri wehurumende VaMorgan Tsvangirai uye mutevedzeri wemutungamiri wehurumende VaArthur Mutambara vakatenderana neMuvhuro kuti havasi kufara nezvimwe zviri kutaurwa nesangano reUN.
Asi vakuru muUnited Nations vanoti hapana zvitsva zvavari kuita nekuti ndizvo zvavagara vachiita kunyika dzose dzavanopa rubatsiro rwemari.